Ringkekọrịta Ihe Nleta na Ọdịda 2015 anyị! | Martech Zone
Chei, olee otu afọ! Ọtụtụ mmadụ nwere ike lelee stats anyị wee zaghachi meh… Mana anyị enweghị ike inwe obi ụtọ na ọganiihu saịtị ahụ mego n'afọ gara aga. Ntughari, nlebara anya na mma na posts, oge ejiri mee nyocha, ọ na-akwụ ụgwọ nke ọma. Anyị mere ya niile na-enweghị ịba ụba na mmefu ego anyị na-enweghị ịzụta okporo ụzọ ọ bụla… nke a bụ uto ọ bụla!
Wepu oge site na isi mmalite spam, nke a bụ stats ikpeazụ anyị maka afọ karịa afọ ma e jiri ya tụnyere 2014:
sessions elu 14.63% ka 728,685
Organic okporo ụzọ elu 46.32% ka 438,950
ọrụ elu 8.17% ka 625,764
Echiche peeji elu 30.13% ka 1,189,333
Peeji nke Oge elu 13.52% ka 1.63
Oge Oge elu 4.70% ruo 46 sekọnd
Ọnụ Ụgwọ ala 48.51% ka 36.64%
Oge Ọhụrụ ala 5.63% ka 85.46%
Ọzọ… abụghị penny nọrọ na nkwalite ọdịnaya na anyị nwetara njikọ ahụ! Site na imepụta saịtị ọhụrụ, anyị lekwasịrị anya na ọsọ na nzaghachi ntakịrị - ma ekwenyere m na ọ kwụrụ ụgwọ.
Tinye akwụkwọ ozi email anyị, ndị na-agụ nri, ndị na-elekọta mmadụ, ndị bịara webinar, ndị na-ege ntị na ndị na-ekiri vidio na anyị na-agakarị ihe karịrị otu nde ndị ọkachamara kwa afọ na akwụkwọ a.
N'ihi mmekorita anyi na BlueBridge, anyị enwetakwala ngwa mkpanaka ụwa nke emelitere nke ọma ka anyị na-ewepụta ọdịnaya site na ọwa anyị niile.
Anyị nwere mmekọrịta dị egwu na Edge nke Web Radio na mmepụta Podcast ma na-achọ ịbawanye iru anyị n'afọ a ka anyị meghere ọhụrụ anyị Podcast studio na ime obodo Indianapolis na ọfịs anyị. Ugbu a, mgbe ọ bụla anyị nwere onye isi n’ọfịs anyị, anyị nwere ike ịnọdụ ala ma dekọọ ndekọ! Anyị enwetakwala Skype n'ime igwekota anyị maka imewe ndị dịpụrụ adịpụ.
Ọ bụrụ na ị bụrụla onye na-agụ nke m, ị mara na m hụrụ n'anya ịkekọrịta mmejọ m, kwa. Ikekwe nnukwu anyị bidoro akwụkwọ ndekọ aha ọrụ. Ọhụụ anyị na mbipụta ahụ bụ na mgbe ị gara na edemede ọ bụla na saịtị anyị, ị nwere ike ịkwaga ozugbo na ngwaahịa ma ọ bụ nweta enyemaka site na ndị ọrụ ruru eru. Anyị mepere ndekọ ọrụ, tinye obere ego, ọ dakwasịrị ozugbo. Ghara ikwu na anyị enweghị ụzọ isi jikọta ya na saịtị anyị. Anyị na-arụ ọrụ na mmalite ọzọ ugbu a iji mee nke ahụ. Enweghị-elekwasị anya, mmefu ego, ma ọ bụ manpower, e nwere bụghị ọtụtụ nke a ohere nke ya launching ọma. Ma anyị ga-esi ebe ahụ!
Anyị mekwara ụfọdụ nnukwu mmepe iji jikọta akwụkwọ akụkọ na-akpọ oku na omume na saịtị ahụ. Nke a ga - enye ndị na - agụ akwụkwọ anyị ohere ị ga - esi na nyocha dị na post wee kwaga na mmiri miri emi na akụkọ ndị ahụ. Anyị na-eme ka njikọ ahụ dịrị ndụ ma na-abanye n'ime nsogbu oge. Anyị ka kwenyere na nke a bụ ihe ịtụnanya, mana anyị etinyela ya n'azụ oge ka anyị na-arụ ọrụ na mmepe ihu.
Dị ka oge niile, jide n'aka na ị ga-ekele ndị na-akwado anyị n'okpuru ma kwado ha n'ụzọ ọ bụla i nwere ike! Ma mee ka anyị mata otu ị chere anyị nwere ike isi meziwanye akwụkwọ a!
Tags: 2015ụba ọnụegoDK New MediaAhịa Podcastndị ọkachamara n’ahịa ahịablog teknụzụ ahịaVidio Ahịaọhụụ ọhụrụokporo ụzọ okporo ụzọnlele ihu akwụkwọpeeji nke kwa ogeoge nke ogesessionsna-elekọta mmadụ na-eso ụzọọrụndị na-ekiri vidiondị ọbịawebinar bịaraafọ na nyocha
Imchọta profaịlụ Linkedin maka ire ere